Welldone Electronics Ltd. waa soo saare PCB (Daabacaadda Circuit Board) ee Shiinaha, u adeega injineerada naqshadeynta iyo soo saarayaasha qandaraaska. Welldone wuxuu buuxin karaa dhammaan baahiyahaaga wax soo saar ee PCB-ga hal dhinac illaa PCB-yada isku dhafan ee isku-dhafan iyo nooc ka soo-saaris ballaaran. Hadafkeenu waa Welldone Electronics si aan ugu adeegno macaamiisheenna shuruudaha iyadoo ka sarreysa rajada ay ka qabaan xagga tayada, gaarsiinta iyo qiimaha.
Wax soo saarkayagu aad iyo aad ayaa loogu adeegsadaa qalabka isgaarsiinta, qalabka caafimaadka, TV, DVD, saacadaha, qalabka ciyaarta iyo qalabka kale ee guryaha. Shirkadda hadda waxay leedahay tiro ka mid ah qalabka wax soo saarka guddiga wareegga ah ee horumarsan, sida qodista CNC, saxanka naxaasta, naxaasta, daasadda waxsoosaarka otomaatiga ah, mashiinka soo-gaadhista, mashiinka toogashada oo si otomaatig ah u beddela, HASL-ka bilaa hoggaanka ah, Dahabka Dahabka ah, qalabka korantada oo otomaatig ah HAL, L / F HAL, OSP (Entek), Gelinta Dahabka / Lacagta / Daasadda, Dahabka, Farta iyo hababka kale ee daaweynta dusha sare.
Dongguan Welldone DL Electronics Ltd. waa xirfadle soosaara MCPCB (biraha salka PCB), kaas oo ay iska leedahay welldone Electronics Ltd. waxayna aasaastaa si loo weyneeyo awooda loona xakameeyo tayada wanaagsan ee alaabada MCPCB. Dongguan Welldone DL Electronics Ltd. waxay ku taalaa magaalada moodada ah ee Humen, halkaas oo muuqaal qurxoon iyo gaadiidku ku haboon yihiin. Waxaan u adeegnay MPCB iftiinka LED-ka iyo warshadaha laambadaha LED-ka, waxaanan ku takhasusay soo saarida PCB salka aluminium, PCB base copper, PCB lamp iyo qalabka iskudhafka kuleylka. Waxaan soo aragnay koox u heelan inay soo saarto LED-ka COB iftiinka isku dhafan, laambadaha awooda sare ee aluminium salka ku haya PCB iyo copper PCB. Waxaan sidoo kale si joogto ah u wada shaqeynaa oo kor u qaadnaa awoodda si aan u gaarno shuruudaha ku habboon ee alaabada LED, sida saameynta iftiinka, shucaaca, cadaadiska iska caabinta iyo caddaynta kuleylka. Waxaan leenahay shati qaran oo tayo sare leh oo saxan saldhig COB qalin ah iyo guddiga tabinta kuleylka sare. Alaabtayadu waxay ku raaxaystaan ​​sumcad sare suuqa.
Welldone Electronics Ltd. waxay diirada saartay horumarinta teknolojiyadda PCB tan iyo aasaaskeedii, iyo dadaallada lagu hagaajinayo heerka teknolojiyadda shirkadda iyo tayada fasalka koowaad, gaarsiinta waqtiga, horumarka joogtada ah ee dhanka wax soo saarka PCB si loo daboolo jihada hagida macaamiisha loona helo horumar ballaaran iyo horumarin.
7 maalmood 24 saacadood ayaa la heli karaa
Qiimaha ugu fiican
Gaarsiinta waqtiga iyo adeegga leexinta degdegga ah
Xiriir wanaagsan iyo adeeg
Shirkaddu waxay ka gudubtay shahaadooyin taxane ah oo ah ISO9001, UL, IPC si loo buuxiyo shuruudaha tayada caalamiga ah
15kii sano ee la soo dhaafey, Welldone Electronics Ltd. waxay ka shaqeyneysay AEI, Foxconn, HP, Motorola iyo shirkado kale oo caalami ah, waxayna siineysay macaamiil tayo iyo xirfad heer sare ah, oo ay ku amaaneen.
Runfengyuan Dhismaha C, Gongyuan Rd, Degmada 74, Baoan, Shenzhen, Shiinaha